Tenga Wireless Magnetic Phone Charger Stand | WoopShop®
SPAIN / GreyFrance / GreyNyika dzakabatana / GreyChina / GreyAustralia / SirivhaCzech Republic / SirivhaSPAIN / SirivheriFrance / SirivheriUnited States / SirivhaChina / SirivheriAustralia / GreyCzech Republic / Grey
Wireless Magnetic Phone Charger Stand - SPAIN / Gray yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Nhamba: 34212
Zita: Charger Stand
Inoshanda: yakagadzirirwa kuchaja
zvinhu: Aluminium alloy, TPU
Saizi: Inenge 11.5 * 6.5cm/4.53 * 2.56in (sezvinoratidzwa pamufananidzo)
Ruvara: Silver, Gray
Yakanyanya Kuenderana: Iyi inomira inoenderana neChaja, ye iPhone 12 akatevedzana. Iyo inokutendera iwe kuti uibvute nyore nyore uye woibvisa zvakare uchichaja panguva imwe chete. Imwe-nhanho yekuisa uye hapana kunetseka.
Yepamusoro-Hunhu Material: Chigadziko ichi chakagadzirwa nepremium Aluminium alloy uye inochinjika silicone zvinhu, inomira inokwana zvakanaka newaya isina waya kuti ishandiswe nyore uye inodzivirira charger yako kubva kumakwara. Nekuchengetera cutout yetambo, iyo inogona kudzivirira zvinobudirira kubatana kwetambo kubva pakuputsika.
Ergonomic Dhizaini: Iine 60 madhigirii yakamisikidzwa kona yeakanakisa ziso nhanho, mbozhanhare inomira inokupa yakanyanya kugadzikana yekuona. Ingoiisa pamba pako kana hofisi dhesiki, unogona kuona nekungotarisa mafoni anouya, mameseji, uye zvimwe zviziviso kana iwe wakabatikana nebasa rako.
Yakapfava Kushanda: Iine mipendero yakatsetseka uye maitiro akaputirwa nejecha pamusoro, inobata runhare inokupa kutaridzika kwepamusoro uye kutetepa kwekubata kunzwa. Uye inoratidzira iyo isiri-skid pads pazasi kuti iwedzere kugadzikana.
Zviri Nyore Kushandisa: Kana yave nguva yekuchaja, ingobaya foni yako pachaja, wobva wanakidzwa nekuona mavhidhiyo nekuchaja panguva imwe chete. Cherechedza: Chinhu ichi HACHIsanganisi Chaja.